Biodegradable vagadziri & vanotengesa - China Biodegradable fekitori
Square Wooden Chipo Sushi Mwedzi Keke Bhokisi
Iyi Square Wooden Chipo Sushi Mwedzi Keke Bhokisi ndiyo yedu nyowani dhizaini muna 2021.Inogona kushandiswa kune Mwedzi Keke, Sushi, Keke kana zvimwe zvipo zvipo.Its zvinhu zvinosanganisira yematanda pasi, pepa muvharo uye yakajeka iyo PET hwindo. Tinogona zvakare kushandura iyo PET hwindo muPLA hwindo., Izvo zvinoita kuti zvese zvive zvipenyu.Zvino nyika yese ichaganhurira mashandisirwo epurasitiki zvinhu, saka kusarudza iyi mhando yekupakata inogutsa vatengi chikumbiro. Uye Tinogona zvakare kudhinda pane yekunze bepa bhokisi neako logo kana chero imwe dhizaini iwe yaunoda. Kana iwe uchida, tapota taura nesu zvakasununguka.
Biodegradable Inokwanisika Hamburger Bhokisi Mudziyo
Bioplastics epurasitiki zvigadzirwa zvinogadzirwa kubva kunovandudzwa biomass zvinyorwa, senge mafuta emiriwo nemafuta, chibage starch, mashanga, matanda, huni, zvishandiswazve chikafu chikafu, nezvimwewo nemimwe midziyo) uchishandisa microorganisms. Bioplastics inowanzo kutorwa kubva kune zvinobva mushuga, zvinosanganisira starch, cellulose, uye lactic acid. Mapurasitiki akajairika, akadai sefossil-mafuta epurasitiki (anonziwo peturu petrobased) anotorwa kubva peturu kana gasi chaiwo.
Makamuri maviri eCorn Corn Starch Chikafu
Chibage chepurasitiki chakagadzirwa kubva polylactic acid (PLA), inova chinotsiva chepurasitiki, chakagadzirwa kubva kune yakaviriswa starch yemiti. Iyo inova nzira inozivikanwa kune yakasarudzika epurasitiki yechinyakare, iyo inotorwa kubva ku petroleum yakavakirwa makemikari.Minda mindaKushandiswa kwakasiyana kwepolylactic acid inogona kunge iri nzira yekudzora kabhoni tsoka inosiiwa nefossil peturu mapurasitiki.
Biodegradable Inoraswa Chibage Starch Chikafu Plate
Polystyrene kurongedza haigone kudzokororwazve uye ingazofanira kuraswa mumarara. Naizvozvo, isu tiri kutsvaga kushandisa zvishandiswezve uye zvinogadziriswa zvigadzirwa zvekugadzirwa pazvinogoneka. Iine starch-based packaging zvinhu, chigadzirwa chacho chinogadziriswa asi hachisi chinhu chakaderera kana chichienzaniswa neyakagadzirwa polymer zvishandiso. uye tapioca starch.
Biodegradable PBAT PLA Flat Vhura Bhegi
Iko kuwedzera kuri kushandiswa kweBiodegradable PBAT PLA Flat Open Bhegi zvinoreva kuti pane kufarira kwekushandisa bio-based (inowedzerwazve) zviwanikwa kugadzira zvigadzirwa izvi, zvisinei, parizvino hapana mirau inoda kuti vagadziri veplastics vazivise huvepo hwezvekugadziriswa zviwanikwa mukati me chigadzirwa. Zvisinei, pane nzira yekuyedza yeEuropean, iyo inotsanangura nzira yekuverenga yekumisikidza bio-yakavakirwa kabhoni zvemukati mumamonomeri, mapolymers uye zvigadzirwa zvepurasitiki nezvigadzirwa, zvichibva pa14C chiyero chemukati.
Biodegradable PBAT PLA Cornstarch Yekutenga Bhegi
Mapurasitiki epurasitiki anogadzirwa pasirese; epurasitiki marara ndiyo mizhinji yemarara emugungwa. Mukupindura izvi indasitiri yepurasitiki iri kupa musika mhando nyowani yemapolymesa anogadziriswa ayo anoonekwa nevazhinji sekupa dzimwe nzira dzekudyidzana nedzemagariro. zvisinei, pane yakavhiringidzika yakawanda yematemu uye inosanganisirwa polymer zvivakwa. Uye isu tinogona kupa Biodegradable PBAT PLA Cornstarch Shopping Bag kugadzirisa dambudziko remarara.